2 Ngaphezu kwalokho, yinina [uNkulunkulu aniphilisile] nakuba nanifile eziphambekweni nasezonweni zenu,+ 2 enake nahamba kuzo ngokwesimiso+ sezinto saleli zwe, ngokombusi+ wegunya lomoya, umoya+ manje osebenza emadodaneni okungalaleli.+ 3 Yebo, phakathi kwabo nathi sonke sake saziphatha ngokuvumelana nezifiso zenyama yethu,+ senza izinto ezithandwa yinyama+ nemicabango, futhi ngokwemvelo sasingabantwana bolaka+ njengoba nje benjalo bonke abanye. 4 Kodwa uNkulunkulu, ocebile ngesihe,+ ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithande ngalo,+ 5 wasiphilisa kanye noKristu, ngisho nalapho sasifile eziphambekweni+—ngomusa ongafanelwe nisindisiwe+— 6 futhi wasivusa+ kanyekanye wasihlalisa ndawonye ezindaweni zasezulwini+ kuKristu Jesu, 7 ukuze kuthi ezimisweni zezinto ezizayo+ kuboniswe ingcebo edlulele+ yomusa wakhe ongafanelwe ngobumnene bakhe kithi esimunye+ noKristu Jesu. 8 Ngempela, ngalo musa ongafanelwe, nisindisiwe ngokholo;+ futhi lokhu akungenxa yenu,+ kuyisipho sikaNkulunkulu.+ 9 Cha, akungenxa yemisebenzi,+ ukuze kungabikho muntu oba nesizathu sokuziqhayisa.+ 10 Ngoba singumkhiqizo womsebenzi wakhe+ futhi sadalwa+ simunye+ noKristu Jesu ukuze senze imisebenzi emihle,+ uNkulunkulu ayilungiselele kusengaphambili+ ukuba sihambe kuyo. 11 Ngakho-ke, hlalani nikhumbula ukuthi ngaphambili naningabantu bezizwe ngokwenyama;+ nanibizwa ngokuthi “ukungasoki” yilokho okubizwa ngokuthi “ukusoka” okwenziwa enyameni ngezandla+— 12 ukuthi ngaleso sikhathi naningenaye uKristu,+ nihlukanisiwe+ nombuso wakwa-Israyeli futhi niyizihambi ezivumelwaneni zesithembiso,+ futhi naningenathemba+ ningenaye uNkulunkulu ezweni.+ 13 Kodwa manje kuKristu Jesu nina enanikade nikude seniye naba seduze ngegazi+ likaKristu. 14 Ngoba ungukuthula kwethu,+ lowo owenza la maqembu amabili+ aba munye+ futhi wabhidliza udonga+ olwaluphakathi luwahlukanisa.+ 15 Ngenyama yakhe+ wabuqeda lobo butha,+ uMthetho wemiyalo owakhiwa izinqumo,+ ukuze adale la maqembu amabili abantu+ abe munye naye abe umuntu omusha oyedwa+ futhi enze ukuthula; 16 nokuba ngesigxobo sokuhlushwa+ enze womabili la maqembu abantu abuyisane+ ngokugcwele noNkulunkulu engumzimba owodwa,+ ngoba ububulele ubutha+ ngaye ngokwakhe. 17 Futhi wafika wamemezela izindaba ezinhle zokuthula+ kini, nina enikude, nokuthula kulabo abaseduze,+ 18 ngoba ngaye, thina, womabili la maqembu abantu,+ sisondela+ kuBaba ngomoya munye.+ 19 Ngakho-ke, ngokuqinisekile, anisezona izihambi+ nabafokazi,+ kodwa niyizakhamuzi+ kanye nabangcwele+ futhi ningamalungu endlu+ kaNkulunkulu, 20 futhi nakhiwe phezu kwesisekelo+ sabaphostoli+ nabaprofethi,+ kuyilapho uKristu Jesu ngokwakhe eyitshe legumbi lesisekelo.+ 21 Kuye, sonke isakhiwo, njengoba sihlanganiswa ndawonye ngokuvumelanayo,+ sikhulela ekubeni ithempeli elingcwele likaJehova.+ 22 Kuye,+ nani futhi nakhiwa kanyekanye ukuba nibe yindawo yokuba uNkulunkulu ahlale kuyo ngomoya.+